Chopbox bụ smart 5in1 ịkpụ osisi, ị ga-enyere anyị aka? [Analysis] | Ozi gadget
Chopbox bụ smart 5in1 ịkpụ osisi, ị ga-enyere anyị aka? [Ntụle]
Nkà na ụzụ na-eso anyị na-aga n'ihu n'ọtụtụ akụkụ nke ụbọchị anyị kwa ụbọchị, Otú ọ dị, ọganihu ya na ngwa ọhụrụ na-eme ka anyị na-ahụ ya ọbụna n'ebe ndị ahụ anyị na-agaghị echetụ n'echiche, na nke ahụ bụ ihe na-ewetara anyị ebe a taa.
Chopbox bụ bọọdụ mbibi mara mma nke nwere ọrụ ise ị maghị na ịchọrọ. Obi abụọ adịghị ya, anyị achọpụtala na ọ bụ ngwaahịa na-adọrọ mmasị nke ukwuu ma anyị enwebeghị ike izere nyocha ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgafe usoro ọdịnala na kichin gị, ị gaghị atụfu nyocha nke anyị mere na Chopbox nke anyị na-eweta taa, ị nwere amamihe ka ọ bụ nri nri?
1 Ihe na imewe: Ecological and waterproof
2 Ngwa ise n'otu
3 Mkpebi nke Editor
4 Uru na ọghọm
Ihe na imewe: Ecological and waterproof
N'ezie, Chopbox a nwere ike ịdị ka bọọdụ achara ọ bụla, dị ka nke ị nwere ike ịzụta na IKEA ma ọ bụ ebe ọ bụla a na-ere ere. Anyị na-achọta ngwaahịa nwere akụkụ nke 454.6 x 279.4 x 30.5 mm buru ibu, dịka ị nwere ike iche n'echiche, ya mere. ọ ga-eme ka a mara mma vasatail ịkpụ osisi. Ngụkọta ibu bụ 2,7 Kilogram, a na-eme ya kpamkpam otu narị pasent organic bamboo. Bọọdụ achara ndị a, bụ́ ihe m na-eji eme ihe n’ụbọchị, bụ ihe e ji elekọta ihe ndị dị ndụ, ọ dịghịkwa mkpa ịrụzi ya, ebe ọ bụ na ha adịghị amịkọrọ mmiri ma ọ bụ na-emetụta iru mmiri.
O nwere obere grooves na nsọtụ na-enyere anyị aka ịnakọta "ihe ọṅụṅụ" N'ime akwụkwọ nri ndị ahụ ma ọ bụ mkpụrụ osisi anyị na-egbutu, ee, ika ahụ na-achọpụta na ma elu nke osisi osisi na ndị na-eji mma na-eji mma dochie anya ma ọ bụrụ na ha na-akawanye njọ na iji.
N'agbanyeghị na enwere ihe elektrọnik, tebụl nwere asambodo IPX7 megide mmiri, Ya mere, ọ bụ mmiri na-adịghị agwụ agwụ, ee, ha na-echetara anyị na anyị agaghị enwe ike ịkwanye ya ma ọ bụ tinye ya na efere efere, ihe a na-akwadoghị na ụdị okpokoro achara ọ bụla, ma ọ bụ "smart".
N'aka nke ọzọ, okpokoro ahụ nwere ike kewaa ya na mpaghara abụọ, nke generic, na tebụl etinyere na mpaghara ala nke anyị nwere ike iwepụ, n'ụzọ dị otú a, anyị ga-ebipụ anụ na azụ dị iche iche, si otú a na-ezere ọtụtụ ihe. mmetọ obe na -atụ ụjọ nke nri. Achọtala m na nke a bụ nnukwu echiche ịgụnye tebụl ọzọ nke ga-arụ ọrụ ịkpụ, na-anakọta ihe mkpofu ma ọ bụ ihe ọ bụla anyị chọrọ.
Ngwa ise n'otu
Anyị atụleworị ọrụ omenala "igbu osisi" n'ihe metụtara Igbe, Ma ihe nwere ike ime ka anyị na-emefu ihe dị ka otu narị euro na ngwaahịa dị otú a bụ kpọmkwem na ọ nwere ọrụ ndị ọzọ. Ka anyị kwuo banyere ụfọdụ n'ime ha:
Ọkụ UV iji kpochapụ: Ịtinye tebụl dị ala na nke elu anyị nwere ike ịgbalite 254 nanometer Ultraviolet Light nke nwere ike igbu 99% nke nje na nje bacteria. Nke a ga-enyere anyị abụọ aka ikpochapụ tebụl n'onwe ha, na itinye mma ma ọ bụ arịa site na oghere akụkụ. A na-arụ ọrụ ọkụ ma gbanyụọ ya na-akpaghị aka na n'ime otu nkeji anyị ga-arụ ọrụ nke ọma.
Ọnụọgụ arụnyere: Ọrụ ọzọ bụ isi, ebe ọ bụ na anyị na-egbutu ma anyị na-eme usoro ntụziaka anyị bụ isi, ihe anyị na-apụghị ichefu bụ kpọmkwem ọnụ ọgụgụ. N'okwu a, naanị site na ịkwaga ihe ndị ahụ n'aka ekpe anyị nwere ike na-akpaghị aka na-atụle nri na oke nke 3 n'arọ. Ị nwere ike ịhọrọ unit nke nha na njikwa njikwa ya yana ọrụ "tare" ka ịdị arọ nke ihe dị arọ. a naghị atụle akpa.
Ngụgụ oge dijitalụ: Dị nnọọ n'okpuru arọ, na akara panel, anyị nwere a ọrụ depụtara na a elekere na-eji uru nke LED panel na-enye anyị oge etiti oge nke ihe karịrị 9 awa ekele ya dijitalụ ngụ oge na-anabata mfe imetụ aka.
Mpempe mma okpukpu abụọ: N'ikpeazụ, ebe ọ bụ na anyị ga-egbutu, ihe dị mma bụ inwe mma ndị ahụ ka ọ dị ugbu a, maka nke a, ọ nwere mma mma abụọ, nke a na-eji seramiiki na nke ọzọ na nkume diamond ka anyị wee nwee ike iji ya na ụdị mma ọ bụla. .
Tebụl a Chopbox na-eji batrị 3.000mAh nke a na-ebufe site na eriri microUSB ya. Aghọtachaghị m ihe mere ha ji zọọ ya microUSB ịmara na USB-C bụ ọkọlọtọ ugbu a. N'aka nke ya, batrị a na-ekwe nkwa na anyị ga-eji ụbọchị 30 mee ihe, anyị enweghị ike ikpochapụ ya na ule anyị, ya mere anyị enweghị ike ịlele oge chaja, nke anyị na-eche na ọ ga-abụ ihe dịka otu awa na ọkara. .
Ọ bụ bọọdụ ịkpụ smart, ee, ma ọ bụ karịa bọọdụ ịkpụ teknụzụ kachasị mma ị nwere ike iche n'echiche, na n'ihi nke a nwere ọnụ ahịa dị nso € 100. (€ 99,00 na Powerplanet online). O doro anya na ya functionalities na-akpali na na ha nwere ike ime ka ndụ anyị mfe, ma nke a bụ a caprice ngwaahịa onye isi kwukwara uru bụ na ọ bụrụ na anyị bụ ndị hụrụ minimalism n'anya, anyị na-azọpụta anọ ngwá ọrụ na kichin, ihe na oge. na ha na-agba ọsọ, ọ na-enwe ekele.
Nke pere mpe
Chekwa ohere na ngwaọrụ
Ọnụahịa ahụ dị elu
Nwere usoro mmụta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Chopbox bụ smart 5in1 ịkpụ osisi, ị ga-enyere anyị aka? [Ntụle]